Masuuliyiin Xilalkii ay Kaalinka 5aad ka Hayeen Laga Caydhiyey – Rasaasa News
Jun 20, 2009 ethiopia, Kilil5, Ogaden, somalia
Kaalinka 5aad oo ku faraxsanow ama ha ku faraxsanaan ee ay khasab tahay in aad kaalinkaaga shaqo sugto, oo aad diyaarna u ahaato, hadii aad shaqo hayso in xili kasta lagaa caydhin karo inta ayna taasi kugu dhicina aad afka buuxsataa.
Jijiga – Ogaden [June 20, 2009] – Waraka naga soo gaadhaya Jijiga ayaa waxay sheegayaan xilalkii laga qaaday gudoomiyeyaalkii labada gabal ee Qoraxeey iyo Dhagaxbuur. Labadan gabal oo ahaa gabalada ugu xasarada badnaa oo ay awal hore aad uga hawl gali jirtay Jwxo, ayaa shantii bilood ee ugu dambaysay waxaa aad u wiiqmay awooda ururka Jwxo, ka dib kolkii ay Jwxo dhaxdeeda ka bilowdeen colaado iyo is khaarijin hoose. Waxaana gudoomiyaha hada xilka laga qaaday Bashir Axmed uu sheegay in uu gabalka Qoraxeey amaan yahay kadib kolkii ay shacabka gabalkani ka soo horjeedsadeen ururka Jwxo oo ay fahmi waayeen dhinaca uu wax u wado.
Gudoomiyaha kale ee xilka laga qaaday ayaa isaga laftigiisu ahaa dadkiigu sida aadka ah ula dagaalamay Jwxo, isaga oo abaabushay ciidamo beeleed aad u badan, madaama loo aanaynayo in in Gabalka Jarar ay aad u joogto Jwxo, laguna laayey gabalkaas xubno Jwxo ka tirsanaa.
Lama garanayo sababta xiligan xilka looga qaaday labadan masuul, in kasta oo eedaymaha ay ka mid yihii; karti xumo, lunsasho hanti qaran iyo musuqmaasuq, hadana waxaa jira arimo aan la is indho marin karin kuwaas oo ahaa, in gabalka Qoraxeey lagu gubay gaadhi ay lahay wakaalada Jidadka ee Itobiya laguna dilay Eng ugu sareeyey mashruuca dhismaha jidka dheer ee u dhaxeeya Godey iyo Qabridahare.
Dhinaca kale waxaa todobaadkii ina dhaafay lagu gubay cagaf cagafyo ay leedahay wakaalada jidadaka ee Itobiya oo yaalay tuulada sasabane oo ka tirsan gabalka Jarar maamul ahaana raacsan degmada dhagaxbuur.
Labadan masuul iyo nin kale oo ahaa wasiirka xafiiska ciyaaraha, oo xilkoodii waayey, ayaa waxaa uun ay ka mid yihiin shaqooyika ka jira degaanka ee ah bilna shaqo bilna baagamuudo.
Shaqooyinka Kaalinka5 ayaa iyagu kuwo aan la isku halayn karin oo aan raacin sharciga shaqada aduunka ama Itobiya arintaas oo dhibaatooyin xoog lehegaa ku haysa qoysaska Somalida Ogadeeniya ee ku nool degaanka Somalida Ogadeeniya.
Ogaysiis Muhiim ah oo Aanu ugu Talagalay Akhristayaalka